Wasaaradda Maalliyadda oo sheegtay in la kordhinaayo qaadista canshuuraha – Radio Muqdisho
Wasaaradda Maalliyadda oo sheegtay in la kordhinaayo qaadista canshuuraha
Sii-hayaha xilka Wasiirka Maalliyadda Soomaaliya Mudane Xuseen Cabdi Xalane oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa uu sheegay in sanadkan cusub la kordhin doono qaadista canshuurta taas oo kuu sheegay in loogu golleeyahay in kor loo qaado dakhliga dowladda Soomaaliya.
Mudane Xuseen Cabdi Xalane Sii-hayaha xilka Wasiirka Maalliyada Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in ay bixiyaan canshuurta ku waajibtay.
“Canshuurtu waa astaanta dowladnimo hadii sida ay tahay loo bixiyo canshuurta isla markaana si wanaagsan loo maareeyo waxaa ay dowladu awoodeysaa in ay bixiso adeegyada dadweynuhu ugu baahan yihiin” ayuu yiri Wasiirka Maalliyadda Soomaaliya.
Wasiirka ayaa oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in Wasaaradda Maalliyadda ay hirgelisay Barnaamij dowladda Soomaaliya ka caawin kara hanaanka Maalliyadda.
Akhriso wax qabadka Wasaaradda Maalliyadda ee sanadkii tagay
War Murtiyeed – Wasaaradda Maaliyadda (January 27, 2015)
Dhagayso Warka Subaxnimo 27.01.2015
Muwaadin Soomaaliyeed oo codsaday in gargaar caafimaad loo fidiyo”sawiro”
Muwaadin Soomaaliyeed oo codsaday in gargaar caafimaad loo fidiyo"sawiro"